New.life.ii.12.lessons by Murann Ezine 652 views
Rogma international bible course le... by Murann Ezine 688 views
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် by youwitnessjesus 379 views
Money Principle in Burmese/Myanmar
Private Healthcare Systems at Private Healthcare Systems
1. ငွေကြေးဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု လောကအမြင် နှင့် ဘုရားအမြင်
2. Financial Policy ဘဝအသက်တာနှင့်ငွေကြေး ဒီလောကမှာ လူတိုင်းငွေလိုချင်ပါတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လောကအမြင်၊ ဘုရားအမြင် ၂မျိုးရှိပါတယ်။ တတိယအမြင်ကတော့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအမြင်ကို မဆွေးနွေးတော့ပါဘူး။ မိမိ မိသားစု၊ အသိုင်းအဝိုင်းမှာပဲ ဆွေးနွေးဖို့ပါ။ လောကအမြင် လူတစ်ဦးချင်း၊ မိသားစု၊ အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံအလိုက် ငွေကြေးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီငွေကြေးကို ရှာဖွေစုဆောင်း၊ တိုးပွားအောင်လုပ်ပြီး မိမိနဲ့မိသားစု၊ အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံလူမျိုးအတွက် ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့၊ ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူ့စိတ်ဆိုတာ ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ပဲ ပြောပြီး၊ တကယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာရင် သြဇာကျြီးမားလာချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ စစ်တပ်ရှိပါတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ အင်္ဂလိပ်လို Defiance Ministry လို့ခေါ်ပါတယ်။ စာလုံးကို ကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းနေပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ စစ်အင်အားကြီးအောင်လုပ်၊ အင်အားကြီးလာရင် ကာကွယ်ရေးမဟုတ်တော့ပဲ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေး ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါဟာ လူ့သဘာဝပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းလဲ စားဝတ်နေရေးလုံလောက်ရုံရင် တော်ပြီ၊ ဆိုပေမဲ့ ငွေချမ်းသာလာရင်၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ နည်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံး အာဏာရှင်ဖြစ်သွားပြီး၊ မိမိဘဝ၊ မိမိနိုင်ငံ ကျဆုံးခန်းကို ရောက်သွားပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းကိုပဲ ကြည့်ကြည့်၊ နိုင်ငံများကိုပဲ ကြည့်ကြည့်၊ အလိုလိုနေရင်း ချမ်းသာနေတာမျိုး တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ အာရပ်နိုင်ငံ ကာတာ၊ အရှေ့တောင်အာရှက ဘရူနိုင်းစော်ဘွားနိုင်ငံ၊ ရေနံတွေနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေပါတယ်။ တစ်ဦးချင်း အလိုလို မိဘမျိုးရိုးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ထီပေါက်သလို၊အခွင့်ကောင်းရသွားလို့ဖြစ်စေ အရမ်းချမ်းသာနေတဲ့ လူတွေလဲရှိပါတယ်။ အခုရေးမဲ့ လောကအမြင်ကတော့ စနစ်တကျ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာတဲ့ လူတွေ၊ နိုင်ငံတွေကို ရေးတာပါ။ အများစု ၈၀% လူတွေ၊ နိုင်ငံတွေက စိုက်တဲ့အတိုင်း၊ ရိတ်သိမ်းရပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှု ကောင်းလို့ ချမ်းသာနေကြတာပါ။ သူဌေး၈၀% ကိုမေးကြည့်ရင်၊ သူတို့အရမ်းကြိုးစားရပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံများလည်း အရမ်းကြိုးစားရပါတယ်။ ငွေချမ်းသာတဲ့လူ များများရှိတဲ့နိုင်ငံဟာ ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ အမေရိကန်၊ ဂျာမဏီ၊ ဂျပန်၊ စင်ကာပူ၊ နော်ဝေး စတဲ့နိုင်ငံတွေက အရမ်းချမ်းသာပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံသားများလည်း ငွေချမ်းသာရုံမက၊ စိတ်ဓါတ်မြင့်မြတ်ကြပါတယ်။ ဘာသာ၊လူမျိုးမရွေး၊ ကိုးကွယ်ဘာသာမရှိတဲ့ ကွန်မြူနစ်၊ ဖရီး သမားတွေလဲ လောကအမြင်နဲ့ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲကြပါတယ်။ လောကအမြင်မှာတော့ အစိုးရ၊ ဘုရင်များက လူတွေဆီက အခွန်ကောက်ပြီး၊ စနစ်တကျ သုံးစွဲခြင်း၊ ဆင်းရဲ၊ဒုက္ခရောက်သူများကို ကူညီခြင်းပါပဲ။ လောကနီတိ လို့ခေါ်ရပါမယ်။ ဘာသာရေးအမြင် Page 1
3. Financial Policy ခရစ်ယန်ကျမ်းစာဟာ ဂျူးလူမျိုး (အစ္စရေး) တွေရဲ့ ကျမ်းစာကို အခြေခံထားပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ၁၃သန်းပဲ ရှိပေမဲ့၊ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး သူဌေးကြီးများစွာ ရှိပါတယ်။ ဘုရားဝါဒကတော့ အရာရာကို ဘုရားသခင် ပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရလာတဲ့ ငွေကြေး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံရလာတဲ့ ငွေကြေးအားလုံး ဘုရားသခင်ပိုင်တယ်။ ဘုရားပိုက်ဆံဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုရားကို အရမ်းရိုသေလေးစား၊ အရမ်းကြောက်၊ အရမ်းချစ်၊ ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်တဲ့ အစ္စရေးလူမျိုးများ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး လူမျိုးတွေ ဖြစ်လာတာ မဆန်းပါဘူး။ ငါ့ပိုက်ဆံ၊ ငါကြိုက်သလိုလုပ်မယ် ဆိုတဲ့ အမြင်ကိုဖြောက်နိုင်ကြတဲ့အတွက် ကြီးပွားလာပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ အားနည်းချက်က သူတို့လူမျိုးပဲ ဥိးစားပေးလွန်းလို့၊ သူတို့ရောက်တဲ့နိုင်ငံအစိုးရ၊ ဘုရင်များက မောင်းထုတ်၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်ကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဂျာမဏီခေါင်းဆောင်၊ ဟစ်တလာရဲ့ သုတ်သင်သတ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်၊ ဂျူးလူမျိုး ၆သန်း သေကြေပျက်စီးရပါတယ်။ ဒါကတော့ ခရစ်ယာန်နဲ့ဂျူး ငွေကြေးအမြင်ဝါဒပါ။ ခရစ်ယာန်များကတော့ ရလာတဲ့ငွေကြေးကို လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ဆင်းရဲ၊ဒုက္ခရောက်သူ အားလုံးကို ပေးကမ်း၊ လှုဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေလဲ၊ ဂျူးလူမျိုးတွေလိုပဲ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲ ကြည့်ရှု၊ ပေးကမ်းကြတာ များပါတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ ဘာသာတိုင်းလဲ လူဒါန်းခြင်းကို အားပေးပါတယ်။ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတိုင်းက ကိုယ့်ဘာသာဝင်တွေကိုပဲ အဓိက ကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာတွေမှာ လှုဒါန်းခြင်းကို အထူးအားပေးလို့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာများ၊ အလှုဒါန်း ရက်ရောကြပါတယ်။ အလှုခံတွေလဲ အလွန်ပေါများပြီး၊ စေတီပုထိုး၊ အလွန်များပြားလှတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ လှုဒါန်းတဲ့နေရာမှာ ဆင်းရဲ၊ ဒုက္ခရောက်သူများကို လှုဒါန်းစေလိုပေမဲ့ ကုသိုလ်မရ၊ ဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်လို့ နောက်ဆုံး စေတီပုထိုးတွေ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရွှေပြားကပ်ခြင်းတွေနဲ့ပဲ ငွေတွေ ကုန်ရပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ စေတီပုထိုးများကို တွေ့ရင်၊ လက်အုပ်ချီပြီး ဘုရားရှိခိုးအာရုံပြုနိုင်တာ မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ လှုဒါန်းခြင်းက ထူးခြားပါတယ်။ အလှုပေးရာမှာ လူမျိုး၊ဘာသာ မရွေးပါဘူး။ ဘာသာတရာတိုင်း ဆင်းရဲ၊ ဒုက္ခရောက်သူများကို ပေးကမ်းလှုဒါန်းဖို့ အထူးအားပေးပါတယ်။ ကိုယ်က ဘယ်လိုလှုဒါန်းရမယ် မသိရင်၊ ဘာသာရေးကျောင်းတွေကို လှုဒါန်းဖို့ အားပေးပါတယ်။ ဘာသာရေးအလှုဒါန်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က နောင်ဘဝအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘဝမှာလဲ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ငွေကြေးမူဝါဒ ချွေတာစုဆောင်း၊ တိုးပွားအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ၁။ လောကအမြင် ၂။ ခရစ်ယန်ဘာသာအမြင် နှစ်ခုသုံးသပ်ချက်ကို တင်ပြပါတယ်။ Page 2
4. Financial Policy ငွေကြေးမူဝါဒ လေ့လာချက်များ ၁။ လောကအမြင် (အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ) Page-1 - CPF Singapore Bank, Saving & Manage to grow Page-2 - China Alibaba and rich stories. Page-18 ၂။ ဘုရားသခင်အမြင် (ခရစ်ယာန်ဘာသာ) Page-45 - ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ (သက်သေခံချက်များ) * ဦးစိန်ဂျွန်း(အမေရိကားရောက်မြန်မာတစ်ဦး) Page-46 * ဦးဂျိုးဇက် (ရွှေလိပ်ပြာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်) Page-49 - ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ (ဓမ္မဆရာအချို့၏၊ ဟောပြော-ရေးသားချက်များ) * ဆရာမျိုးသူ (Singapore) Page-54 * ဆရာစောပက်ထရစ် (Yangon) Page-60 * ဆရာဇော်ဝင်း (Perth, Australia) Page-64 * ဆရာဆိုး၊ (Yangon) Page-66 - အင်ဒရူးကာနယ်ဂျီ (အမေရိကအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်) Page-70 * Gospel of Wealth - Chuck Feeney ချပ်ဖီးနေအကြောင်း Page-88 (ဒေါ်လာသန်းပေါင်း၈ထောင် မသေခင်အကုန်လှုခဲ့သူအကြောင်း) - ငွေကြေးနှင့်ဆိုင်သော ဘုရားသခင်မူဝါဒ (UVDavid၊ ဆရာအောင်နိုင်ဘာသာပြန်သည်) Page-94, 103 * Bible Study သူဌေးကြီးအများစု၏ ငွေကြေးမူဝါဒများသည် လက်တွေ့တွင်၊ သူ့ဆွေမျိုး၊ သာစဉ်မြေးဆက်များအတွက်သာ ဖြစ်ရပါသည်။ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရမင်းများလည်း လက်တွေ့တွင် အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားအတွက်ပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် မှန်ကန်သော ငွေကြေးမူဝါဒဖြင့် အသက်ရှင်ပါက ယခုဘဝ၊ နောင်ဘဝ စိတ်ရှင်းလင်းစွာ၊ ကြွယ်ဝသောဘဝကို ရရှိခံစားနိုင်မယ်သာဖြစ်သည်။ မိမိ၏ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ခံယူချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ မူဝါဒများကို လက်နာကြပါစို့...။ The End.. Page 3
5. လောကအမြင် အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ 1
6. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 စင်ကာပူက CPF ဆိုတဲ့ ဘဏ်စနစ်တစ်ခုအကြောင်း (National Interest) ငွေစုဆောင်းခြင်း အကျိုးကျေးဇူး၊ ရလဒ်များကို စင်ကာပူ-လက်ထောက်ဝန်ကြီးက ပါလီမန်မှာ ရှင်းပြနေပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရဝန်ထမ်းများ လစာရဲ့၆% စုဆောင်းတဲ့စနစ် Social Security Fund ကို စတင်အကောင်ထည်ဖေါ်တော့မယ်လို့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ဇူလိုင် ၂၀၁၄ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ငွေစုဆောင်းခြင်းဟာ လူတိုင်းနှစ်သက်ပေမဲ့ လက်တွေ့လုပ်ဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်လို လစာက၊ စားသောက်စရိတ်တောင် မနည်းဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ နိုင်ငံမျိုးမှာပို ပိုပြီးခက်ခဲလှပါတယ်။ စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာအောင်ကိုကို သုတေသနစာစောင်၊ ဆောင်းပါး၊ စာအုပ်များစွာ ထုတ်ဝေ၊ လုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေးစီးပွားမူဝါဒ စာအုပ်၊ စာ-၁၃၄ မူဝါဒ(၇) မှာ " ကိုယ်ကျိုးအတ္တကြီးသူများ၊ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသူများ၊ မည်သူတေတေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုသူများသာ ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေလျှင် မည်သည့်နိုင်ငံမျှ၊ မည်သည့် သဘာဝသယံဇာတများ၊ မည်မျှပေါကြွယ်နေစေကာမူ ယင်းနိုင်ငံသည် ဆင်းရဲမြဲ၊ ဆင်းရဲနေမည်ကို ယနေ့ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ခရိုနီစီးပွားရေးပုံသဏ္ဍန်ကို ပပျောက်စေရန် လိုအပ်ပေသည်။..." လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ နိုင်ငံတော် စုဆောင်းမှုနှုန်းအကြောင်း စာ-၁၉၆ မှာလည်း "၁၉၆၀ ပတ်ဝင်းကျင်က ထိုင်းနိုင်ငံ၏စုဆောင်းမှု ပျှမ်းမျှ ၂၀% မှ ၁၉၉၀နှစ်များတွင် ၃၅% အထိတိုးတက်လာသည်။ စုဆောင်းမှု Saving မှ ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု Investment သို့ပြောင်းလဲနိုင်လာပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်ငွေ Capital Stock တိုးတက်လာသည်။ ".. လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ Page 1 2
7. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်ရန် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ၊ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားပေါ်လစီများ၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းပရိုဂျတ်များစွာမှာ "စုဆောင်းခြင်း" ဟာ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက် လတ်တလော အကျိုးကြီးစွာ မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ မိမိနှင့်မိသားစုအတွက်မူ အလွန်အကျိုးများပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ ဒု-သမ္မတ စိုင်းမောက်ခမ်းနဲ့အဖွဲ့ ဇူလိုင်-၂၀၁၄ စင်ကာပူခရီးစဉ် ရောက်ရှိပါတယ်။ စင်ကာပူ၊အမေရိကန်၊ဂျပန်၊တောင်ကိုးရီးယား နိုင်င်ငံများဟာ မြန်မာခေါင်းဆောင်များ စံနမူနာယူရင်း၊ ခဏခဏ သွားလာပါတယ်။ ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိကြီးများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များစွာလည်း လေ့လာရေးသွားလေ့ရှိပါတယ်။ လေ့လာစရာများစွာ ဥပမာ လာဘ်စားမှု၊ ရထား၊ကားလမ်းများ၊ မြို့ပြလုပ်ငန်းများ၊ CPF ဘဏ် ချွေတာစုဆောင်းရေး စသဖြင့် လေ့လာကြပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်း၊ မိသားစုတိုင်း လူမှုပြသနာများ၊ အခက်ခဲများကို စနစ်တကျ၊ လေ့လာဆန်းစစ်လိုက်ရင် ဇစ်မြစ် ၇၀% သော ဇစ်မြစ်တွေဟာ စားဝတ်နေရေး မလုံလောက်လို့ ဆိုတာကို လူမှုပညာရှင်များ တွေ့ရှိကြပါတယ်။ စားဝတ်နေရေး ဆိုတာ အခြေခံလူ့တန်းစားအဆင့်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ မိသားစု၎ဦး အိမ်ထောင်ကို တစ်နေ့ကျပ်၂၀၀၀ နဲ့ စာဝတ်နေရေး၊ အဆင်ပြေနိုင်မလား ဆိုတာကို ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုမျဉ်းကြောင်း Poverty Line နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမျဉ်းကြောင်းက တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ မတူပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်အပါဝင် အဖွဲ့စည်းပေါင်း ၂၃ခု ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲမွဲတေမှု လူတစ်ယောက် ဒေါ်လာ ၁.၂၅ လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီဇယား www.unicef.org (2011 data) မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲမွဲတေမှု မထည့်ထားပါဘူး။ ၂၀၁၄ မြန်မာသမ္မတပြောကြားချက်၊ "လူ၎ဦးမိသားစုတစ်ခု-တစ်နေ့ကျပ်၂၀၀၀" နဲ့တွက်ရင် ဒေါ်လာ ၀.၅၀ လို့သတ်မှတ်ရပါမယ်။ အိမ်ထောင်တစ်ခုဟာ တစ်နေ့ကျပ်၂၀၀၀ မရှာနိုင်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ပြသနာဖြစ်ပြီပေါ့။ ကျပ်၂၀၀၀ ဆိုတာ တောနယ်က ဟင်းသီးရွက်နဲ့ စားသောက်တဲ့ စရိတ်ပါ။ မြို့ပေါ်မှာတော့ လူတစ်ယောက် တနေ့ကျပ်၅၀၀၀ မရှာနိုင်ရင် ပြသနာဖြစ်ပြီပဲ။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ကိုယ်ပဲကိုင်ထားချင်တာပေါ့။ ငွေကြေးနဲ့ကြောင့် လူမှုပြသနာ ၇၀% ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်၊ ငွေကိုချွေတာဖို့ လက်တွေ့လုပ်ရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးမှာတော့ လိုင်စင်၊ပါမစ် ရလိုက်သူတွေပဲ ချမ်းသာတယ်။ ငွေစုတဲ့လူတွေ မချမ်းသာဘူး ပြောကြမလား။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေများကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ ငွေစုနိုင်တဲ့ မိသားစုတွေ ပြသနာနည်းပါးတယ် ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူလူထု စားဖို့တောင် မနည်းရှာရတယ်။ အလုပ်ကိုင်တောင် ရှာဖွေမပေးနိုင်တာ၊ ငွေစုဆောင်းဖို့ မလွယ်ဘူး ပြောပါတယ်။ ဘယ်သူမှာ သူတို့လစာငွေ ၅%၊ ၁၀% ကိုဖြတ်တောက်ပြီး စုခိုင်းရင်၊ စိတ်ဆိုးကြမှာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် အစိုးရက Page23
8. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 စုဆောင်းပေးမှုနဲ့ စတင်ရပါမယ်။ အစိုးရက မစုဆောင်းနိုင်သေးရင်လဲ ကိုယ့်အလုပ်သမား၊ ကိုယ့်တူ၊သားသမီးများကို စုဆောင်းဖို့ အားပေး၊ အလေ့ကျင့်လုပ်နိုင်သူတွေ နောက်၁၀နှစ်ကြာရင် လူမှုပြသနာနည်းမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ စကားမစပ် ရေးရရင် ဘာသာရေးကိုင်ရှိုင်းသူဟာ ရောင့်ရဲမှုရှိလို့ ငွေစုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့မိသားစုမှာ ပြသနာလည်းနည်းပါတယ်။ အဖေ၊အမေ မစုဆောင်းနိုင်ရင်၊ နှစ်ကြာလာချိန် မိသားစု ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ မစုဆောင်းနိုင်လို့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး ဖြစ်နေတာ အစိုးရရုံးတိုင်းမှာ အောက်ပါဆိုင်းဘုတ်လေး ကပ်ထားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှု မြန်မာက ၂၀၁၂ထက် ၆ဆင့် တိုးတက်လာတယ်လို့ ကမ္ဘာဒီယားအထက် ရောက်သွားပါတယ်။ ဆက်ကြိုးစားနေပါတယ်။ စင်ကာပူ CPF ဘဏ်ငွေစုဆောင်းခြင်းရလဒ်များ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေကို မစုမနေရ၊ အလုပ်လုပ်နေသရွေ့ စုဆောင်းဖို့အတွက် CPF ဘဏ်ကို ၁၉၅၅ခုနှစ်က စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စရေးနဲ့စင်ကာပူအစိုးရ အကြံဥာဏ်နဲ့ စငွေကြေးပညာရှင်များ ပူးပေါင်းပြီး တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ လူအများစုဟာ ငွေရလာရင် သုံးစွဲမိမယ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ရင်း လုံးပါးသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူအများစုရဲ့ ဝင်ငွေကိုမစုမနေရ အစိုးရကစုဆောင်းစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့ကုမ္ပဏီကြီးများကို ပါဝင်လာအောင် ဆွဲဆောင်ပြီး၊ အဲဒီစုဆောင်းငွေကနေ ဝန်ထမ်းကို အကြွေးစနစ်နဲ့ တန်ဖိုးနည်းအိမ် HDB flat အစိုးရက ဆောက်လုပ်ရောင်းချပေးခြင်းနဲ့ပဲ စတင်ပါတယ်။ စင်ကာပူ CPF ဘဏ်စနစ်နဲ့ HDB flats တွေ ဆောက်ဖို့ကြံရွယ်တဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည် ဦးနုအစိုးရက ပြည်တော်သာစီမံကိန်းနဲ့ ရန်ကင်း တိုက်ခန်းများစွာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပါပြီ။ စင်ကာပူအစိုးရက ပြည်တော်သာစီမံကိန်းကို Page34
9. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 လာရောက်၊ လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၆၀ကတည်းက တိုက်တွေ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ မြန်မာပြည်လို ၄ထပ်တိုက်ခန်းတွေပါ။ အခုတော့ စင်ကာပူအိုးအိမ်ဌာနကြီးဟာ အထပ်မြင့် HDB flats တိုက်ခန်းစုစုပေါင်း ၁သန်းကျော်နဲ့ (Key Statistics, 1,011,027 units, 2012) စင်ကာပူနိုင်ငံသားများကို နေစရာအိမ် ဆောက်ပြီး၊ CPF စုဆောင်းငွေနဲ့ ရောင်းချပြီးခဲ့ပါပြီ။ ဆက်ဆောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု ဝန်ထမ်းများရဲ့ CPF ဘဏ်မှာ စုဆောင်းငွေဟာ နေအိမ်ဝယ်ခြင်း၊ ဆေးကုသစရိတ် နဲ့ အသက်ကြီးတဲ့အချိန် ပင်စင်ငွေ စသည်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သမားက လစာရဲ့ ၂၀%ကို ထည့်ရပြီး၊ အလုပ်ရှင်ကလည်း ၂၀% လိုက်ထည့်ပေးရပါတယ်။ အလုပ်သမားရဲ့ အသက်၊ လစာပေါ်မူတည်ပြီး ထည့်ရတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းမတူပါဘူး။ မိမိစုဆောင်းထားတဲ့ ငွေကို ဘယ်လောက်ရှိနေပြီ။ အတိုးနှုန်းဘယ်လောက်ရတယ် စသဖြင့် အင်တာနက်အွန်လိုက်က အချိန်မရွေးကြည့်နိုင်ပြီး၊ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း စာရွက်လည်း စာတိုက်က မှန်မှန်ပို့ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရသူများ PR, Permanence Resident များအတွက် CPF ဘဏ်စုဆောင်းငွေဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စင်ကာပူက အပြီးထွက်ခွာတော့မယ် ဆိုရင်၊ ဒီစုဆောင်းငွေ အားလုံးကို စင်ကာပူအစိုးရက အတိုး၊ အရင်း အားလုံး ၁၀ရက်အတွင်း ပြန်ထုတ်ပေးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံသား Citizen များအတွက်ကတော့ ဒီငွေကို ဘယ်သောခါမှ ပြန်ထုတ်မရအောင် စနစ်တကျစီမံထားပါတယ်။ အလွန်များပြားတဲ့ ငွေကြေးဖြစ်လို့ နိုင်ငံတော်ဓနဥစ္စာများမှာ CPF ဘဏ်စုဆောင်းငွေများဟာ အဓိကကျပါတယ်။ စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ ဘဏ်အားလုံးထက်သာအောင် အတိုးနှုန်းပေးပါတယ်။ CPF စုဆောင်းငွေမလိုတဲ့ လူတန်းစားကတော့ သူဌေး၊ လုပ်ငန်းရှင်များ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ငွေကို စနစ်တကျကိုင်တွယ်တတ်တော့ သူတို့ပိုက်ဆံကို CPF ဘဏ်ထဲ စုပုံမထည့်ကြပါဘူး။ အလုပ်သမား ဝန်ထမ်းတွေပဲ သူတို့ဝင်ငွေရဲ့ ၃၀% ကို စုရပါတယ်။ ဥပမာ Salary Income $3000, Employee CPF Contribution 18% သာမန်ဘွဲ့ရတစ်ယောက် တစ်လကို ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ဝင်ငွေရှိရင်၊ ၃ပုံတစ်ပုံ (ဒေါ်လာ ၁၀၀၀) CPF စုဆောင်းငွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီတော့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ $12,000 စုဆောင်းပြီး၊ အနှစ်၂၀ကျော်ရင် အတိုးအရင်းပေါင်း၊ ဒေါ်လာ၅သိန်းလောက် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သာမန်အများစု ဝန်ထမ်းတွေက တစ်လကို ဒေါ်လာ တစ်ထောင်ကျော်ပဲ ရပါတယ်။ သူတို့အတွက်လဲ CPF ဘဏ်စုငွေက တစ်လ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဆိုရင် တစ်နှစ်ကို $3600 စုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။ အနှစ်၂၀ ဆိုရင် အတိုးအရင်းပေါင်း ဒေါ်လာ တစ်သိန်းနီးပါး စုဆောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစုဆောင်းငွေနဲ့ပဲ အိမ်အကြွေးဝယ်နိုင်အောင်၊ အသက်၆၅နှစ်ကျော်ရင် လစဉ် ဒေါ်လာ၃၀၀လောက် အငြိမ်းစားပင်စင်ပေးနိုင်အောင် လုပ်ထားတဲ့ စနစ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Page45
10. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 CPF ဘဏ်ရဲ့ ဝက်ဆိုဒ် www.cpf.gov.sg မှာအသေးစိတ်များ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ လစာရင်းနဲ့အချိန်ပို တစ်လကို ဒေါ်လာတစ်ထောင် ဝင်ငွေရှိရင် ဝန်ထမ်းလက်ထဲ ဒေါ်လာ၈၀၀ ရပါတယ်။ စုဆောင်းငွေ တစ်လဒေါ်လာ ၃၆၀ ($360) ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း ဝန်ထမ်းလစာက စုငွေ ၂၀% = $200၊ ကုမ္ပဏီက ထပ်ဆောင်းပေးငွေ ၁၆% $160၊ စုဆောင်းငွေကို ဘဏ်အကောင့်၃ခု Ordinary, Special, Medisave ဆိုပြီး ခွဲပေးထားပါတယ်။ တကယ်တော့ စုစုပေါင်းလစာ $1160 ရတယ်လို့ပြောရပါတယ်။ စုဆောင်းငွေက $360၊ လက်ကျန်အသားတင် ရငွေက $800 ဖြစ်ပါတယ်။ နဲနဲရှုပ်ပေမဲ့ ဝန်ထမ်းရော၊ ကုမ္ပဏီရော၊ အစိုးရရော သုံးဦး၊ သုံဖလှယ် ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Example. Basic Salary = $700 Additional OT wages = $300 Total wages = $1000 Employee’s share of CPF contribution 20% = $200 Employer’s share of CPF contribution 16% = $160 Employ take home = $800. Total CPF contribution = $360 Published on: July 8, 2014 CPF ဘဏ်စုဆောင်းငွေစနစ်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ အိမ်ပိုင်ဆိုင်စေခြင်း ပထမဆုံး အကျိုးမြတ်ကတော့ ၁၀နှစ်လောက် စုဆောင်းပြီးရင်၊ အစိုးရရဲ့ အိမ်တစ်လုံး ဝယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ဈေးရဲ့ ၂၀%ကို CPF ငွေနဲ့ပေးလို့ လောက်ငှရင်၊ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ မပါပဲ အိမ်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ မလောက်ရင်တော့ အိမ်တန်ဖိုးရဲ့ ၂၀% ပြည့်အောင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ထည့်ပေးရတယ်။ အဲဒီ CPF ဘဏ်စနစ်ကြောင့် စင်ကာပူ မိသားစုတိုင်း အိမ်ပိုင်ဆိုင် ကြပါတယ်။ အိမ်ဖိုးကျန်တဲ့ ၈၀% ကိုလည်း CPF လစဉ်ထည့်ငွေနဲ့ အရစ်ကျပေးနိုင်တော့ ကိုယ့်လက်ထဲက ပိုက်ဆံတောင် မကုန်တော့ပါဘူး။ အိမ်ပိုင်ဆိုင် စေခြင်းဟာ စင်ကာပူ CPF စနစ်ရဲ့ အဓိက အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူ နိုင်ငံသားများအတွက် စား၊ဝတ်၊နေရေးကို အစိုးရက ဖန်တီး ပေးရမယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း စား၊ဝတ်၊ နေရေးအတွက် အလုပ်အကိုင်များစွာ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ လုပ်ရည် ကိုင်ရည် ရှိသူများက ဝင်ငွေ ကောင်းလွန်းပြီး၊ လူအများစုက Page56
11. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 သာမန်ဝင်ငွေပဲရပါတယ်။ အလုပ်ရှိပေမဲ့ သာမန်ဝင်ငွေပဲရှိသူအတွက် ငွေစုဆောင်းဖို့ဆိုတာ အပြောလွယ်၊ အလုပ်ခက်ပါပဲ။ အိမ်ပိုင်ဖို့ဆိုတာ ဝေးလှပါတယ်။ CPF စနစ် အောင်မြင် သွားတဲ့ အတွက် စင်ကာပူမှာ နိုင်ငံသားမိသားစုတိုင်း အစိုးရ ဆောက်ပေးတဲ့ တိုက်ခန်း HDB Flat ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရကြပါတယ်။ မိမိနှင့်မိသားစု ဆေးကုစရိတ် စင်ကာပူမှာ ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ အလုပ်ရှင်တိုင်းက တာဝန် ယူရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်သမား ဆေးခန်းသွား၊ ဆေးရုံတက်ရရင်၊ ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူ၊ ကုန်ကျစရိတ်ကို အာမခံကုမ္ပဏီက ပေးပါတယ်။ သို့သော် မိမိရဲ့ မိသားစု နေမကောင်း၊ ဆေးရုံတက်ရင် အာမခံမရှိလို့ ငွေကြေးကုန်ကျပါတယ်။ CPF ဘဏ်စနစ်ကို မိမိ မိသားစုကိုလည်း ကျန်းမာရေးအာမခံ (Medishild) ပေးထားလို့ ဆေးရုံစရိတ် မကုန်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သတ်မှတ် ထားတာထက် ပိုကုန်ရင်တော့၊ CPF ကျန်းမာရေး ရံပုံငွေထဲက ထုတ်ယူ သုံးစွဲကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိ စုဆောင်းငွေ များကို မိမိနဲ့မိသားစု ဆေးရုံတက်ရရင် ငွေမရှိလို့ ပူစရာ မလိုပါဘူး။ CPF စနစ်က တာဝန်ယူပါတယ်။ အသက်အာမခံ၊ သားသမီးပညာရေး၊ စတော့ရှယ်ယာ စင်ကာပူ နိုင်ငံသားသား အားလုံးနီးပါး CPF အသင်းဝင် များဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး၊ အသက်အာမခံ မဝယ်မနေရ၊ အစိုးရက ဒီစုဆောင်းငွေ ကိုသုံးပြီး ဝယ်ခိုင်းပါတယ်။ ဥပမာ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ၇၀ ပေးရတယ်ဆိုရင်၊ အကြောင်းမလှလို့ ကိုယ်သေဆုံး သွားရင်၊ အသက် အာမခံငွေ ဒေါ်လာ၅သောင်း ကျန်ခဲ့တဲ့ ဇနီး၊ မိသားစု ရရှိပါတယ်။ ကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါ လို ကုသစရိတ် ကြီးတဲ့ရောဂါရပြီး၊ ခွဲစိတ် ကုသရရင်လဲ အသက် အာမခံက ပြန်ပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ CPF စုဆောင်းငွေနဲ့ ကိုယ့်ဇနီး၊ သားသမီးများ အတွက် အသက် အာမခံဝယ်ပေး လို့လဲ ရပါတယ်။ စုဆောင်းငွေ များစွာ ရှိသူများကတော့ သားသမီးများ ပညာရေး၊ အစိုးရ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ စတော့ ရှယ်ယာများ ဝယ်ယူရေး တွေမှာ CPF စုဆောင်းငွေကို အသုံးပြုခွင့် ပေးထား ပါတယ်။ အငြိမ်းစားယူချိန်ငွေထုတ်ပေးခြင်း (ပင်စင်) မိမိအသက်၅၅နှစ်ပြည့်ရင် CPF ဘဏ်ကနေ၊ အငြိမ်စား ငွေကို ချန်တားပြီး၊ ပိုတဲ့ငွေ ကို ပြန်ပေးပါတယ်။ အသက်၆၅နှစ် နောက်ပိုင်းမှ ကျန်တဲ့ငွေထဲက လစဉ်ငွေ ပင်စင်အဖြစ် ထုတ်ပေးပါတယ်။ အသက်၅၅နှစ် ကျော်ပေမဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်သေးလို့ ဆက်လုပ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Page67
12. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 အကြောင်း တစ်စုံတရာ (ဥပမာ ကျန်းမာရေးကြောင့်) အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် ထောက်ခံစာရွက်စာတန်များ ပြပြီ၊ လစဉ်ေ ထာက်ပုံကြေး ရနိုင်ပါတယ်။ မိမိ စုဆောင်းငွေကို မိမိကပဲ ပေးရပါတယ်။ အစိုးရဘဏ်က ငွေတွေကို သိမ်းထားပြီး၊ နှစ်စဉ် အတိုး တွက်ချက်ပြီး၊ ပေးပါတယ်။ ဥပမာ ဒေါ်လာ ၂သိန်းလောက် စုမိနေသူဟာ အိမ်ဝယ်ဖို့ ၆သောင်း နှုတ်လိုက်ပြီး၊ ကျန်တဲ့ငွေတွေကို အစိုးရ CPF ဘဏ်မှာပဲ ထည့်ထားရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ဒေါ်လာ ၄သောင်း ၈ထောင်ထိ ဖယ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒီငွေနဲ့ပဲ ဆေးကုသခြင်း နဲ့ ဆေးဖိုး ဝါးခ ပေးရပါတယ်။ CPF ဘဏ်ထဲက ကျန်းမာရေး စရိတ် မလောက်ငှရင်တော့ ဆေးရုံ ကုန်ကျစရိတ်ကို ငွေလက်ငင်း (သို့မဟုတ်) အရစ်ကျနဲ့ပဲ ပေးရပါတယ်။ အလားတူ နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၏ ဝန်ထမ်း၊အလုပ်သမား ငွေစုစနစ်များ အမေရိကန်နဲ့ဥရောပ နိုင်ငံများက အခွန် Tax ဆိုပြီး လစာငွေထဲက တိုက်ရိုက် ဖြတ်ချ လိုက်ပါတယ်။ လစာရဲ့ ၄၀% အထိ ဖြတ်ချပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ Social Security လို့ခေါ်ပါတယ်။ အစိုးရက အဲဒီငွေတွေကို ပြည်သူလူထု အတွက် သုံးစွဲပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ချိန် ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စတဲ့လူမှု ရေးရာများမှာ အထူးနှုန်းတွေနဲ့ အစိုးရက ထောက်ပံ့ ပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးချိန် နေထိုင် စားသောက်ရေးကို အစိုးရက တာဝန်ယူတဲ့အပြင်၊ လစဉ် ထောက်ပံ့ကြေး ငွေလည်း ပေးပါတယ်။ ဆေးကုသ ခွင့်လဲ ပေးပါတယ်။ ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်းမှာ အားနည်းချက် များစွာ ရှိလာတဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ထောက်ပံ့တဲ့ စင်ကာပူ CPF စနစ်ကို နိုင်ငံ တော်တော်များများ ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးလာပါတယ်။ မလေးရှား EPF ဘဏ်စနစ် ၁၉၅၁မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမား နှစ်ဦး၊ လစဉ် စုဆောင်းငွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သမားအတွက် အငြိမ်းစားယူဖို့နဲ့ အတွေထွေ စရိတ်များ အတွက်ပါ။ ၂၀၁၂မှာ အသင်းဝင်ပေါင်း ၁၃.၆သန်း ရှိနေပြီး ၆.၄သန်းဟာ ပုံမှန် ထဲ့ဝင်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှား နိုင်ငံသားတွေ စုဆောင်း ထားတဲ့ ငွေကြေးက RM526.8 billion ဖြစ်နေ ပါပြီ။ ဗီယက်နမ် Social Insurance System Page78
13. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 အရင် ကတော့ အစိုးရဝန်ထမ်း၊ ပင်စင် လစာငွေပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကစပြီး Social Insurance System ကို အစိုးရ ဝန်ထမ်းများနဲ့ စတင်ပါတယ်။ စင်ကာပူ CPF စနစ်လိုပဲ လစာရဲ့ ၆% ကို စုဆောင်းရပါတယ်။ ၂၀၁၂မှာ ၇%၊ ၂၀၁၄မှာ ၈% တိုးပြီး စုဆောင်းဖို့ ကြေငြာ ထားပါတယ်။ စင်ကာပူနဲ့ မတူတာကတော့ ဗီယက်နမ် လစာငွေ နည်းလို့ လူတွေက မစုချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အစိုးရဝန်ထမ်း တွေကတော့ မစုမနေရဖြစ်ပြီး၊ နေအိမ်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အငြိမ်းစား ထောက်ပံ့ငွေများ ခံစားရပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သူများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုပေးရပါတယ်။ အငြိမ်းစားထောက်ပုံကြေး ဆိုတာက အဝေးကြီးလိုသေးတော့ လူထုစိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူထုစိတ်ဝင်စားတဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ရင် Unemployment Benefit စုဆောင်းငွေထဲက လစဉ်ပြန်ထုတ် သုံးခွင့် ပေးထားပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားရင် ကိုယ်စု ထားတဲ့ နောက်ဆုံး၆လ ပျှမ်းမျှ စုဆောင်းငွေကို အလုပ် သစ်ရတဲ့အထိ လစဉ်ပြန်ထုတ် သုံးခွင့်ပေးပါတယ်။ မိသားစု အတွက် နေအိမ်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စရိတ်များလည်း အာမခံ လုပ်ငန်းနဲ့တွဲပြီး ခံစားခွင့် ပေးပါတယ်။ ပိုပြီးစုဆောင်းလိုသူများ၊ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း လုပ်သူများအတွက် Voluntary Social Insurance စနစ်ကို ၂၀၀၈မှာ ပြဌာန်း ထားပါတယ်။ အလုပ်သမား ၁၈% စုဆောင်း ရပါတယ်။ မပေးနိုင်တဲ့အချိန် ရပ်လိုရပါတယ်။ ဒီစုဆောင်း ငွေတွေ ရှိနေရင် အစိုးရထံမှ အထူး အခွင့်အရေး၊ အိမ်အကြွေး ဝယ်ယူခွင့်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အာမခံ ခံစားခွင့်များ နဲ့ဆွဲတောင်ပြီး၊ ငွေစုဆောင်းဖို့ အားပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတော့ Social Security System အမေရိကန် အုပ်ချုပ်စဉ် ကတည်းက Social Security System ဆိုပြီး စနစ်တကျ လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီး ကာလမှာ ဂျပန်ပြီးရင်၊ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံဟာ အာရှမှာ အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း အာဏာရှင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သမ္မတ မားကို့စ် ခေတ်မှာ၊ ဝိသမ ခရိုနီစနစ် ကြီးထွားလာပြီး၊ တိုင်းပြည် ဆင်းရဲသွားပါတယ်။ မြန်မာပြည် ထက်တော့ အများကြီး သာပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံအတိုင်း Social Security Fund လုပ်ပေးခဲ့တာလဲ အစိုးရ ဝန်ထမ်း လောက်ပဲ ခံစားခွင့် ရပါတယ်။ လူထုအတွက် အကျိုး သက်ရောက်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ စင်ကာပူ CPF စနစ်ကို အထူးသဖြင့် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများ မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ် တို့ ကော်ပီကူးချ ကျင့်သုံးနေပါပြီ။ အမေရိကန် မှာတောင် 401(k) ဆိုတဲ့ စင်ကာပူလို စနစ် ပေါ်နေပါပြီ။ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများဟာ လက်ရှိ Social Security Fund ကိုပဲ Page 8 9
14. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 ထည့်မလား၊ အသစ်ဖြစ်တဲ့ 401(k) ကိုပဲ ထည့်မလား ဆုံးဖြတ် ရပါတယ်။ CPF အလားတူ၊ နိုင်ငံတကာ စုဆောင်းငွေ စနစ်များ ကတော့.. EPF Employee Proficient Fund (Malaysia) Social Insurance System (Vietnam) Social Security System SSS (Philippine) National Social Security System (Indonesia) National Insurance (UK) Social Security in France South African Social Security Agency Social Security (United States) Social Security (Sweden) Social Security (Australia) Israel -Social Security and Welfare စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာလူထုနှင့်အစိုးရဝန်ထမ်းစုဆောင်းစနစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများကို ငွေစုဆောင်း စနစ် မရှိပါဘူး။ ယခင်ကတော့ မြန်မာ အသက်အာမခံ လုပ်ငန်းကပဲ အစိုးရဝန်ထမ်း စုဆောင်းငွေ စနစ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး မြန်မာပြည် စစ်အာဏာရှင် များက ငွေစက္ကူ တရားမဝင် ကျေငြာခြင်း၊ ဘဏ်များကို တရားမဝင်ေ ကျငြာခြင်း စတဲ့ ပြည်သူလူထုငွေကို လုယက်၊ ဓါပြတိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်များ ကြောင့် ဘဏ်မှာ ငွေစုခြင်းစနစ် မြန်မာပြည်မှာ ပျောက်ဆုံး သွာှးပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ ထုတ်တဲ့ ငွေစက္ကူ၊ မြန်မာပြည်က အစိုးရဘဏ်၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် အားလုံးဟာ ယုံကြည်မှု ပျက်ပြား သွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရသစ် တက်လာပြီး၊ အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာကို မြန်မာငွေ ခြောက်ကျပ်ခွဲ ပုံသေ သတ်မှတ်ထားချက်ကို ရုတ်သိမ်းပြီး၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ပြည်တွင်းမှာ တရားဝင်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များကို လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အာမခံများ ပေးခြင်းနဲ့ မြန်မာလူထုက ဘဏ်များအပေါ် ယုံကြည်မှုရှိလာပါတယ်။ လူအများ ဘဏ်များမှာ ငွေ စုဆောင်းတဲ့ အလေ့ကျင့် ပြန်လည် နိုးထ လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ ငွေဆို လက်ထဲ မထားပဲ ငွေပိုရှိလာရင် ရွှေ၊ငွေ၊ အိမ်မြေ၊ တယ်လီဖုန်း၊ ကား စသဖြင့် ဝယ်ယူ သိမ်းဆည်း ထားတဲ့ အကျင့်ကနေ အခု ဘဏ်မှာ ငွေစုတဲ့စနစ်၊ ဒေါ်လာများ လက်ဝယ် သိမ်းထားခြင်း၊ ဘဏ်မှာ ကန်ဒေါ်လာ စုဆောင်းခြင်း စသဖြင့် တိုးတက်လာပါတယ်။ Page910
15. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများကတော့ ပင်စင် ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ သာမန် ဆေးခွင့်ရတာက လွဲပြီး၊ ဝန်ထမ်း မိသားစု ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ဘာအာမခံချက်တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။ ပြည်သူလူထု အထူးသဖြင့် တောင်သူ လယ်သမားများဟာ အလွန် ဆင်းရဲ မွဲတေနေပါတယ်။ ကိုယ်မွဲတေ နေတာတောင် ကိုယ်မသိတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ မိသားစု တစ်ခု တစ်ရက် ကျပ်၂၀၀၀ ဆိုလောက်တယ် လို့ပြောတော့ မြို့နေလူထုက ဝိုင်းဝန်း ရှုံ့ချကြတယ်။ တောမှာတော့ ကောင်းကောင်း လောက်ငှပါတယ်။ အသားဟင်း တခါတလေမှ စားတဲ့ တောင်သူ လယ်သမားများ လယ်ယာသီးနှံပဲ စားသောက်တော့ ငွေမကုန်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေအဆင့် ရောက်နေလို့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက ဆင်းရဲမွဲတေမှုလွတ်မြောက်ရေး ပရိုဂျက်များနဲ့ ငွေချေးပေး၊ အကူညီ ပေးနေပါတယ်။ ကုလအဖွဲ့များ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဘဏ်၊ ဂျပန်ဂျိုက်ကာ၊ အိုင်အမ်အက်ဖ် ငွေကြေးများစွာကို အစိုးရဝန်ထမ်းများက ကိုင်တွယ်သုံးစွဲရတဲ့အတွက် အစိုးရဝန်ထမ်းလောကမှာ ငွေကြေး အဆင်ပြေ လာပါတယ်။ အဂတိ အလွန်ကျွန် မဖြစ်အောင် ထိန်းနိုင်မယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝန်ထမ်း အများစုက လစာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း SIM card လောက်ပဲ ရရှိနေပြီး၊ အာမခံစနစ်ဆိုလို့ ကျန်းမာရေးတစ်ခုခုဖြစ်ရင် သိန်းနဲ့ချီကုန်ကျစရိတ်ကို ဘယ်ဝန်ထမ်းမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ငွေရွှင်တဲ့ ဝန်ထမ်းပဲ မိသားစုကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စရိတ်ကြီး များကို တတ်နိုင်ပါတယ်။ အများစုဝန်ထမ်း များဟာ ဘဏ်မှာ စုဆောင်းဖို့ နေနေသာသာ နေစရာ အိမ်တောင် မရကြပါဘူ။ နေပြည်တော်က အစိုးရဝန်ထမ်း များကတော့ နေစရာ တိုက်ခန်းတွေ ရထားလို့ တော်ပါသေးတယ်။ တိုက်ခန်းကို ငှားစားခွင့် မရှိပါဘူ။ ခြုံကြည့်ရင် နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဝန်ထမ်းများက စတင်ပြီး စင်ကာပူ CPF စနစ်လို ငွေ စုဆောင်းတဲ့ စနစ် အမြန်ဆုံး လုပ်ဖို့လိုနေပါတယ်။ မြန်မာပြည် လာရောက်တဲ့ စင်ကာပူ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းရှင်များက ဝန်ထမ်းများကို CPF စနစ်လို၊ စုဆောင်း စေပါတယ်။ ဝန်ထမ်း ၅%၊ ကုမ္ပဏီ ၅% စုဆောင်းပေးပြီး၊ အလုပ်ထွက်ရင် အကုန်ပြန် ထုတ် ပေးပါတယ်။ ဝန်ထမ်းကလည်း အပြင်မှာ လုပ်တာထက် လစာများတယ်၊ အလုပ်ပြုတ်ဖို့မရှိဘူး။ ခွင့်၊ ဆေးခွင့်၊ ဆေးကုသခွင့် စရိတ်များလည်း ပေးတော့ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီမှာ မြန်မာတွေ တော်တော် လုပ်ချင်ကြပါတယ်။ စင်ကာပူက ပြန်လာပြီး မြန်မာပြည်မှာ လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ မြန်မာများလည်း သူ့ဝန်ထမ်းကို ငွေစုတဲ့ စနစ်နဲ့ မစုမနေရ စုဆောင်း စေပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ခုခု ကျန်မာရေး၊ လူမှုရေး ပြသနာဖြစ်ရင် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းရဲ့ စုဆောင်းငွေ ရှိနေတော့ အရေးပေါ်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အလွန် အကျိုးရှိတဲ့ စနစ်ဖြစ်လို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရက မကျင့်သုံး နိုင်သေးခင် စိတ်သဘော မှန်တဲ့၊ လုပ်ငန်းရှင် များများက စုဆောင်း ပေးမှုကို ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆို ပါတယ်။ Page 10 11
16. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 စုဆောင်းငွေဖြင့်နေစရာအိမ်ရရှိရေး ဘာဖြစ် မြန်မာပြည်ဝန်ထမ်းများ ငွေစုဆောင်း ဘဏ်စနစ်တစ်ခု အမြန်လိုသလဲ ဆိုတော့ နေစရာ အိမ်ဈေး အရမ်း ကြီးလာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဝန်ထမ်းတိုင်းကို မြေကွက် ချရောင်းပေးဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်နေပါတယ်။ သူတို့ခမြာလည်း အများစု အဂတိမကင်းနိုင်ပေမဲ့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံက ဈေးကြီး လွန်းတဲ့ အိမ်ခြံမြေ ဝယ်နိုင် လောက်အောင် ငွေမရှိကြပါဘူး။ ဌာနမှုး၊ ဦးစီးမှု၊ ညွှန်မှုး၊ ညွှန်ချုပ် အဆင့်တွေ ကတော့ မြေကွက် များစွာ ပိုင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများစုမှာ အငြိမ်းစား ယူရင် နေစရာအိမ်မရှိပါ။ မြန်မာပြည်မှာ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတောင် မြေကွက်လွတ်တွေ တစ်ပုံကြီး တွေ့နေရပါတယ်။ ဘာလုပ်ဖို့လဲ။ အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့စစ်တပ်ပိုင် မြေတွေ မြေငှားစာချုပ်တွေ လုပ်စား နေကြပါတယ်။ လုပ်ဖို့လဲ ကြံနေကြပါတယ်။ ဒီခရိုနီ အပေါင်းပါ စစ်ဗိုလ်များ၊ အစိုးရ အရာရှိကြီးပဲ ချမ်းသာရင်၊ ဆက်ချမ်းသာ နေတာ တော်သင့်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများကို မြေကွက် ချပေးတဲ့ အစဉ်အလာ ရှိပါတယ်။ လုပ်သက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များမှာ မြေကွက်ဖေါ်ပြီး မြေရောင်း ချပေးပါတယ်။ အရစ်ကျ ပြန်ဆပ်ရပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ ၁၉၈၈မတိုင်မီက တောင်ဥက္ကလာ၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ မင်္ဂလာဒုံ စတဲ့ မြို့သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်း နောက်ပိုင်းမှာတော့ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပေါက်ကန်၊ တောင်ဒဂုံ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ပတ္တမြားမြို့သစ် စသဖြင့် နေရာ ချထား ပေးပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများကို အရစ်ကျ ရောင်းချပေးပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့ထဲ ကျူးကျော်နေထိုင်သူများကိုလဲ လူမရှိတဲ့ ရွဲ့ဗွက်တွေမြေတွေမှာ မြေကွက် ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုအစိုးရသစ် တက်လာပြီး ၃နှစ်အကြာမှာ ဝိသမခရိုနီများနဲ့ ဝိသမအစိုးရ အရာရှိကြီးများက ဝိုင်းဝန်း ဖန်တီးပေးလိုက်လို့ တစ်နိုင်ငံလုံး အိမ်မြေဈေးတွေ ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံးအဆင့် တမဟုတ်ချင်း ရောက်သွားပါတယ်။ ဒါကို အရှေ့တောင် အာရှအဆင့် ဈေးမှန်ရောက်ဖို့ အစိုးရဦးစီးပြီး မြို့သစ်ဖေါ်၊ မြေကွက်များ အရစ်ကျနဲ့ရောင်းချ၊ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ယာများ ဆောက်ပြီး ရောင်းချ ပေးလိုက်ရင် အချိန်တိုအတွင်း အိမ်ခြံ မြေဈေး တည်ငြိမ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Page 11 12
17. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 Richest Man in Babylon ဆိုတဲ့စာအုပ် ချွေတာ စုဆောင်းခြင်း အားဖြင့်၊ ဘဝကို တည်ဆောက်ဖို့ လမ်းညွန် ထားတဲ့ အလွန် ကောင်းမွန်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဖေမြင့် ဘာသာပြန်ပြန်ပြီး " ဘေဘီလုံမှအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် " အမည်နဲ့ ထုတ်ဝေ ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၅၀၀၀ ဘေဘီလုံမြို့က လူချမ်းသာတစ်ဦး၊ အသုံးစွဲလွန်ပြီး အကြွေးတွေ မဆပ်နိုင်တော့လို့ ထွက်ပြေးရတယ်။ ငွေဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ ရှာဖို့ ဓါးပြဂိုဏးထဲ ရောက်ပြီး၊ အဖမ်းခံရလို့ အနိုမ့်ဆုံး ကျွန်လူတန်းစား အဖြစ် ရောင်းစား ခံရတယ်။ သခင်စိတ် ရှိတဲ့ ကျွန်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘေဘီလုံမြို့ကို ပြန်လာပြီး၊ ကြွေးရှင်တွေကို အရစ်ကျ ပြန်ပေးပါမယ် ဂတိခံရင်း၊ နောက်ဆုံးမှာ ဘေဘီလုံမှ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့ တကယ့် အဖြစ်ပျက်ပါ။ မှတ်တမ်း တင်ထားတဲ့ ကျောက်စာ တွေကို ဘာသာပြန်တဲ့ ရှေးဟောင်း သုတေသန ပါမောက္ခကြီးလဲ အသုံးစွဲ လွန်ပြီး အကြွေးတွေ အရမ်းထူနေတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၅၀၀၀ က ချွေတာ စုဆောင်းတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ လစဉ် စုဆောင်းခဲ့တယ်။ လင်မယား နှစ်ယောက် အသုံးစွဲ ဆင်ချင်တယ်။ နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း တကယ်ပဲ အကြွေးဘဝက လွတ်မြောက် ခဲ့ရကြောင်း စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို အမေရိကန် ဘဏ်တွေက လူတွေကို ချွေတာစုဆောင်းဖို့ ပညာပေးဖြန့်ဝေကြတယ်။ လူတွေကလည်း ခုချက်ခြင်း သူဌေးဖြစ်တဲ့နည်းကို၊ လိုင်စင်ပါမစ်နဲ့ ချမ်းသာနည်းတွေကိုပဲ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။ Rich Dad စာအုပ်ကို ဖတ်ရင် လူတိုင်းချမ်းသာနိုင်တယ် လို့အားပေး ထားတဲ့အတွက် စာဖတ်သူကို လမ်းမှားကို ရောက်သွား စေနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်လို စတော့ရှယ်ယာ၊ ဘွန်း ဈေးကွက်လုံးဝ မရှိတဲ့နိုင်ငံက လူတွေ မဖတ်သင့် ပါဘူး။ ချွေတာ စုဆောင်းတဲ့ အကျင့်ကို ပျိုးထောင် ပေးတဲ့ " ဘေဘီလုံမှအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် " စာအုပ်ကို ဖတ်ရင်အကျိုးများမှာပါ။ Page 12 13
18. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 ငွေကို စုစေလို တဲ့အတွက် ဘဏ်များကို ငွေစုဘဏ်လို့ အမည်ပေးပါတယ်။ စင်ကာပူမှာတော့ အလုပ်သမား များအတွက် CPF ငွေစုဘဏ်၊ ကျောင်းသား မိသားစုများ အတွက်၊ POSB ငွေစုဘဏ် များရှိပါတယ်။ အဲဒီ အစိုးရပိုင်တဲ့ ဘဏ်များရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ ချွေတာ စုဆောင်းရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူ CPF အကြောင်းကို စင်ကာပူမှာ နေထိုင်ခဲ့သူများ သိပါတယ်။ မြန်မာလို ရေးသားမှုတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဆရာအေးငြိမ်း(လေးမျက်နှာ) သူ့ရဲ့စာအုပ်မှာ ရော၊ သူ့ရဲ့ ဘလောက်ထဲမှာရော CPF ဘယ်လို ထည့်ဝင်ရတယ်။ ဘယ်လို အကျိုး ကျေးဇူးများ ရယူသင့်တာတွေ မြန်မာလို ဘာသာပြန်၊ အသေးစိတ် ရေးပြထားပါတယ်။ နောက် ဆောင်းပါးများမှာ ကိုးကား တင်ပြပါမယ်။ ဒီဆောင်းပါး မှာတော့ အကျဉ်းပဲ ရေးလိုက် ရပါတယ်။ စုဆောင်းခြင်းနဲ့ဘာသာရေးအမြင် ဘာသာရေးအမြင်မှာ စုဆောင်းခြင်းနဲ့လှုဒါန်းခြင်း အတူတူပဲလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ များများလှုဒါန်းနိုင်သူဟာ ကိုယ်ပိုင်ငွေလည်း စုဆောင်း၊ ကြီးပွားလေ့ရှိပါတယ်။ တချို့က အမြင်တစ်မျိုးနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်း ကြီးပွားအောင် လှုဒါန်းတာမျိုးက ဘာသာရေးကျင့်ဝတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာများ သူဌေးဖြစ်မဲ့လူတွေ ငယ်စဉ်ကတည်းက အလှုဒါန်းလုပ်ကြပါတယ်။ မွတ်ဆလင်များမှာလည်း နှစ်စဉ် ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ ၂.၅% ကို ပေးလှုရပါတယ်။ ခရစ်ယာန်နဲ့ဂျူးတွေမှာတော့ ၁၀% ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ အလှုငွေပေးခြင်း ရှိပါတယ်။ ဘာသာတရားတိုင်းမှာ မရှိဆင်းရဲသူ၊ မိဘမဲ့၊ မုဆိုးမ များကို ပေးကမ်းလှုဒါန်းခြင်းကို အားပေးပါတယ်။ ဘဝပေးကုသိုလ်အရ ချမ်းသာနေသူများ၊ ဆင်းရဲမွဲတေသူတွေကို ကြည့်ရှုရပါမယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၊ သူဌေးများက သူတို့အလုပ်သမားများကို စုဆောင်းစေသလို အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ အစိုးရမင်းများဟာ ပြည်သူလူထုကို စုဆောင်းဖို့ ပိုပြီး၊ စနစ်တကျ ကူညီရပါတယ်။ စုဆောင်းငွေကို တိုးပွားအောင် လုပ်နိုင်တာက အရည်အချင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ငွေကြေးချမ်းသာပြီး၊ လှုဒါန်းခြင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာသာရေးအရဆိုရင် လူတွေဟာ စုဆောင်းထားတဲ့ ဥစ္စာကိုပဲ အမြဲစိတ်ရောက်လေ့ ရှိပါတယ်။ လှုဒါန်းမှု များများလုပ်နိုင်သူဟာ နောင်ဘဝအတွက် စုဆောင်းထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သေမှာမစိုးရိမ်တော့ပါဘူး။ သူက များများ လှုဒါန်းထားပြီးဖြစ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအရ နောင်ဘဝ ပိုပြီးကောင်းမယ်၊ ခရစ်ယာန်၊ မွတ်ဆလင် ဘာသာများအရ ကောင်းကင်ဘဏ္ဍာကို စွဲလမ်းပြီး၊ ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်မယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် စုဆောင်းခြင်း (လှုဒါန်းခြင်း) ဟာ ဒီဘဝမက၊ နောင်ဘဝအတွက်ပါ အလွန်အကျိုးထူးပါတယ်။ စုဆောင်းငွေကို တိုးပွားစေခြင်း Page 13 14
19. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 စင်ကာပူ-CPF ဘဏ်စနစ်-နိုင်ငံသား စုဆောင်းငွေ စနစ်ဟာ အခုကျင့်သုံးမှု နှစ်၅၀ ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄မှာ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆၀၂ (US$ 490 billion) တိုးပွားလျှက်ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို အစ္စရေးလူမျိုး (ဂျူးလူမျိုး) များက သင်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဂျူးလူမျိုး ၁၃သန်းလောက်ရှိပြီး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာရပ်လူဦးရေ သန်း၄၀၀ ကို အံတုပြီး၊ နေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ငွေစုဆောင်း၊ စီးပွား လုပ်တတ်တဲ့ စရိုက်တွေကို စင်ကာပူက အတုယူပါတယ်။ အမေရိကန်ဂျူးလူမျိုး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာတတ်များ ကလည်း အစ္စရေးကို ပံ့ပိုးပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံ စတင်ချိန် ၁၉၆၃ခုမှာ ခေါင်းဆောင်လီကွမ်းယူက အဂတိလိုက်စားမှုကို ပပျောက်စေခဲ့ပါတယ်။ နောက် CPF ဆိုတဲ့ လူတိုင်းကို ငွေစုဆောင်းစေပါတယ်။ အဲဒီငွေ ပမာဏဟာ မနည်းပါဘူး။ အောက်ပါ ဇယားကို စင်ကာပူအစိုးရ ဝက်ဆိုက်မှာ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ စင်ကာပူ နိုင်ငံရဲ့ အရံ ငွေကြေးကို GIC, Temasek, MAS ဆိုတဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့စည်းသုံးခု Singapore Investment Corporation (GIC), Temasek Holdings (Temasek) and the Monetary Authority of Singapore (MAS) စီမံခန့်ခွဲပါတယ်။ ဒီဇယားမှာ MAS $304 billion, Temasek $198 billion , GIC $100 billion - စုစုပေါင်း စင်ကာပူဒေါ်လာ ဘီလျှံပေါင်း ၆၀၂ ($602 billion - ~US$ 500 billion) ရှိပါတယ်။ အလွန် များပြားလှတဲ့ ဒီ ငွေကြေးကို ပိုပြီး တိုးတက် များပြားစေဖို့ ရင်းနှီးမြှတ်နှံ၊ စီမံခန့်ခွဲပါတယ်။ စင်ကာပူ နိုင်ငံတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပရိုဂျက်များနဲ့၊ နိုင်ငံတကာ ပရိုဂျက်တွေမှာ ရင်းနှီးမြှတ်နှံပါတယ်။ အများစု ဘီလျှံပေါင်းများစွာကို ကမ္ဘာကျော် စီးပွားရေးပါရဂူကြီးများကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ လစာပေးပြီး ငှားပါတယ်။ အမြတ် ထွက်ရင် အချိုးကျ ဆုကြေး ပေးပါတယ်။ Role Model စံနမူနာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ နည်းပညာများ ဟိုးအဝေးကြီး ဂျာမဏီ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန် ..သွားကြည့်နေစရာမလိုပါဘူး။ အနီးနားလေးမှာပဲ ရှိနေပါတယ်ဗျာ...။ Page 14 15
20. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 နိဂုံး ဒီနည်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ငွေကြေး ချန်ပီယံ များကို ခေါ်ပြီး စင်ကာပူ နိုင်ငံပိုင် အရံငွေကြေး Reserved Money တွေ တိုးတက်လာတာ အခုဘီလျံ ၆၀၀ကျော်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ငွေကြေးများရဲ့ အစဦးဆုံး ငွေကြေးများဟာ CPF ဘဏ်က စုဆောင်းငွေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငွေကို အခွန်လို့မသတ်မှတ်ပါဘူး။ (စကားချပ်။ စင်ကာပအခွန်ငွေ Tax per GDP က ၁၇% ပဲရှိပါတယ်။ မြန်မာ ၄% ကမ္ဘာ့အနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ လစာ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အောက်ကို အခွန်မကောက်ပဲ၊ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကို အဓိကထားပြီး အခွန်ကောက်ပါတယ်)။ အဲဒီ အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု အဖွဲ့ကြီး ၃ခုက CPF ဘဏ်ကငွေကို ချေးယူပြီး အတိုး အများဆုံး ပေးပါတယ်။ ပြည်သူတွေကိုလဲ ကျေနပ်စရာ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်အားလုံးထက် ပိုတဲ့၊ ဘဏ်တိုးပေးပြီး၊ လူထုကို ရှင်းတမ်းထုတ်ပြန်ပါတယ် (ပုံ)။ ပြီးတော့ အဲဒီငွေတွေကို နိုင်ငံတကာမှာ ပြန်ရင်းနှီးပါတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်နိုင်ငံ Bank of America မှာ ရင်းနှီးထားတဲ့ ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၁၀၀ကျော်ကို တဖြေးဖြေး ထုတ်ယူပြီး Bank of China ကို ပြောင်းလဲ ရင်းနှီးတာမျိုးတွေ လုပ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကို ရောက်ဖို့ ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး မနေသင့်ပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်တာလဲ မဟုတ်ပါ။ အစိုးရမလုပ်နိုင်သေးလဲ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်း..တွေမှာကျင့်သုံးသူများ ပိုအောင်မြင်ပါတယ်။ Public Saving နည်းလမ်းနဲ့ ထိုင်း၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ တိုင်ဝမ် တို့မှာ လုပ်သွားပြခဲ့ပါပြီ။ ဗီယက်နမ်လဲ လုပ်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်နိုင်သူ၊ တတ်သိ ပညာရှင်များစွာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်က တတိယ စက်မှုဇုံ SEZ ကျောက်ဖြူအတွက် မြန်မာအစိုးရက Singapore Consortium, GPC Consultant ကိုငှားရမ်း စာချုပ်ထားပါတယ်။ စင်ကာပူကပဲ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု များကို တာဝန်ခံပြီး ခေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည် တည်ဆောက်ဖို့ လူအင်အား၊ သယံဇာတ၊ နည်းပညာ၊ ငွေအင်အား လေးမျိုးအထက်မှာ ယုံကြည်မှုရဖို့ဆိုတာ အရေးအကြီး ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံထံမှာ ငွေကြေး နည်းပညာများ မြန်မာအစိုးရ လိုချင်ပါတယ်။ စင်ကာပူ ကုမ္ပဏီများကလည်း ပေးနေပါတယ်။ ရအောင် ယူတတ်ဖို့ အဓိက အကျုဆုံးကတော့ Saving Attitude ချွေတာ စုဆောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ် ဖြစ်ပါတယ်။ မလိုအပ်ရင် မသုံးပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနက Social Security Fund ကိုအတည်ပြု ထားတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းများ၊ စုဆောင်းဖို့နည်းဥပဒေများ လုပ်ဆောင် နေပါတယ်။ သယံဇာတ ဘယ်လောက်ရှိပါစေ အစိုးရလူကြီးမင်းများ အဂတိလိုက်စားမှု နည်းပါးမှပဲ ပြည်သူလူထု Page 15 16
21. CPF Bank - Public Saving System 16-Jul-2014 ငွေစုဆောင်းစနစ် အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ သူဌေးကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်မိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များပေါ် မူတည်နေရှာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ကုမ္ပဏီများ ဝန်ထမ်း ၅%၊ ကုမ္ပဏီ ၅% စုဆောင်း ပေးနိုင်ကြပါစေ။ မြန်မာအစိုးရလည်း CPF ငွေစုဘဏ်လို ဝန်ထမ်းများအတွက် စီမံကိန်း လုပ်နေပါတယ်။ လာမယ်- ကြာမယ် မဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များက လူတော်လူကောင်း၊ ဘဏ်သူဌေးများ၊ ငွေကြေးပညာရှင် များကလည်း မြန်မာအစိုးရထံ ပူပေါင်း လုပ်ဆောင် နိုင်ကြပါစေ။ မြန်မာ့ပြည် ဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သမားများ အတွက် အခြား အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများလို့ပဲ စုဆောင်း ငွေအားဖြင့် ရှိစေလိုပါတယ်။ ဒုတိယ အဆင့် အနေနဲ့ တနိုင်ငံလုံးမှာ ဝန်ထမ်းများ အတွက် မြေကွက် ရောင်းပေးခြင်းနဲ့ နေစရာအိမ် ဆောက်ပြီး အရစ်ကျ ရောင်းပေးမဲ့ အချိန်ကို မျှော်လင့် စောင့်စား လျှက်ပါ။ ဇော်အောင်(မုံရွာ) Page 16 17
22. Alternate ◌နnergy- China အလီဘာဘာနှင့်မြန်မာများ Alibaba.com ဘ၀အစပြုခြင်း Jack Ma ၁၉၆၄တွင် မွေးဖွားပြီး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ၁၉၇၀နှစ်များတွင် Hangzhou ဒေသ၌ ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ဟိုတယ်မှကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို စက်ဘီးတစ်စီးဖြင့် သူတို့မြို့လေးကို လိုက်လံပြသည့်အလုပ် လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအလုပ်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားလေ့ကျင့်နိုင်ရုံမက ပြင်ပကမ္ဘာကြီကိုလည်း မြင်လာစေသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ နှစ်ကြိမ်ကျရှုံးပြီးသည့်နောက် ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းတက်ပြီး ၁၉၈၈တွင် အင်္ဂလိပ်ဆရာဘ၀ ရောက်ခဲ့သည်။ Hangzhou Dianzi University တွင်ဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲကြီး ၁၉၉၅တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုအတွက် အင်္ဂလိပ်စကားပြန်အဖြစ် လိုက်သွားခွင့်ရခဲ့သည်။ ပထမဆုံး အင်တာနက်နှင့် စတင်ထိတွေ့ရသည်။ တရုပ်ပြည်အကြောင်း အွန်လိုင်းတွင် မရှိသလောက်ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ တရုပ်ပြည်ပြန်ရောက်ပြီး Page 1 18
23. Alternate ◌နnergy- China ဒေါ်လာနှစ်ထောင် $2000 ချေးယူကာ တရုပ်အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ် ကုမ္ပဏီကို စတင်ခဲ့သည်။ တရုပ်ပြည်၏ ပထမဆုံး အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မကြာမီ ပြိုင်ဖက် China Telecom နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပီကင်းမြို့တွင် တရုပ်အစိုးရအတွက် e-commerce ၀င်လုပ်ခဲ့သည်။ ကြီးပွားလာခြင်း သိပ်ကြာကြာ အစိုးရအလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ ၁၉၉၉တွင် ဒေါ်လာ ခြောက်သောင်း ($60,000) ဖြင့် အလီဘာဘာ Alibaba.com အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ တရုပ်စီးပွားလုပ်ငန်းများ အချင်းချင်း ကုန်သွယ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ပြည်ပမှ သွင်းကုန်၊ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ပထမတွင် သူ့တိုက်ခန်းကလေးမှ လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်မှာ Softbank ကဲ့သို့သော အကြီးစားရင်းနှီးမြှတ်နှံသူများ ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုများကြောင့် လုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ ရှယ်ယာ ၄၀% ကို ရာဟူး Yahoo သို့ $1 billion ဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည်။ သူ့အကြောင်း Dotcom ဒေါ့ကွန်းများ အောင်မြင်စဉ်က Ma သည် အလျှင်အမြန် တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ တရုပ်ပြည်ထုတ်ကုန်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရန် ကူညီပေးနိုင်ခဲ့မှုကြောင့် ၂၀၀၂ နှစ်ကုန်တွင် အမြက်အစွန်များစွာ ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၀က်ဆိုဒ်သည် အလွန်တိုးတက်လာပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသူ ၅၆သန်းရှိလာသည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၂၄၀ကျော်မှ အသုံးပြုလာကြသည်။ အလီဘာဘာ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ တခြား လက်လီအရောင်းလုပ်ငန်း ၀က်ဆိုဒ်ဖြစ်သော Taobao ကို ၂၀၀၃တွင် စတင်ခဲ့ရာ ကမ္ဘာအများဆုံးကြည့်ခံရခြင်း တစ်နေ့ကို သန်းပေါင်း၅၀ 50 million unit visitors per day ဖြစ်လာသည်။ ပစ္စည်းပေါင်း သန်း၈၀၀ကျော် အရောင်းစာရင်း တင်ထားသည်။ Taobao သည် အများပိုင်မဟုတ်သည့် အင်တာနက်ဆိုဒ်များတွင် တန်ဖိုးအရှိဆုံး ဟု အချို့ကဆိုသည်။ Yahoo နှင့်ခွဲခွာခြင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာလာသော အလီဘာဘာ သည် Yahoo သို့ရောင်းထားသော ၄၀% ရှယ်ယာများကို ပြန်ဝယ်ဖို့ ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့သည်။ Yahoo အကြီးအကဲ Jerry Yang ရာထူးဖယ်ပေးလိုက်ပြီးသည့်နောက် Alibaba နှင့် Yahoo တို့ ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာသည်။ အလီဘာဘာ မှ ရာဟူးကို $7.1 billion ငွေသား(သိုမဟုတ်)စတော့ဖြင့် ရာဟူးရှယ်ယာတစ်ဝက်အတွက် ပေးမယ်ဟု ကြေငြာသည်။ လက်ကျန်ကို အလီဘာဘာအုပ်စု အများပိုင်လုပ်ပြီးမှ ၀ယ်မည်ဟု ဆိုသည်။ ရယ်စရာ Jack Ma ကပြောပြသည်။ တစ်နေ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုတွင် သူထိုင်ပြီး၊ အလီဘာဘာ Page219